Dib-u-eegis Taariikhda iyo wax-qabadka Musharax
1. Waxaa Sharaf weyn ii ah inaan idinla wadaago qaar ka mid ah afkaarta mugga weyn ee la xiriirta dib-u-dhiska qarannamida Soomaaliyeed ee uu wado Dr. Aweys Cumar Maxamuud, qaarkoodna uu horay usoo bandhigay, mar haddii uu go'aansaday inuu doorashada dhici doonta 2021 u tartamo xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. In badan oo idin ka mid ah, waxaad Aweys ku barateen maqaaladihi sida wanaagsan u qornaa ee uu dhowaanahaan ka qoraayay dowlad-dhiska Soomaaliya, laakiin anigu waxaan aqaanay laga billaabo bartamihii sanadihii 80 meeyadi markaas oo aan Agaasime Guud ka ahaa Wasaaradda Caafimaadka asaguna ow ahaa Sarkaal firfircoon oo dhalllinyar oo markaas aad uga soo muuqanaayay Xafiiski Baraarujinta Caafimaadka ee Wasaaradda. Isla waqtiyadaas ayuu Aweys ku guuleystay deeq waxbarasho ee ay bixineysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO; waxaana deeqdaas waxbarasho uu u aaday dalka UK halkaas oo uu tababar shahaadada Diboloomaha uga soo qaatay. Marki uu waxbarashadiisi dhammeystay, waxa uu dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya si uu shaqadiisi halkeedi uga sii wato laakiin duruufihi adkaa ee dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed ee berigaas jiray aawadood waxaa dantu ku qasabtay inuu fursado shaqo iyo kuwa nololeed ka raadsado dalka dibadiisa.
Waxaan dib ugu kulanay UK
2. Sanado badan kadib, waxaan isugu nimid dalka UK oo dagaalladi sokeeye ay na wada geeyeen. Labadeenuba waxaan jecelnahay dalkeena iyo dadkeenu inay dib u dhismaan, sidaas darted waxaan ka wada qeyb qaadanay dhaqdhaqaayada nabad-u-raadinta Soomaaliya ee waqtiyada kala duwan ka socday dalka UK. Waxaa dhacday in aniga iyo Aweys iyo dad badan oo kale nalagu wada casuumay shirarki gogol-xaarka u ahaa shirki weynaa ee loogu magac daray Shir-weynihi Soomaaliyeed ee Magaalada London (London Conference on Somalia) oo lagu qabtay Aqalka Lancaster House 23ki bishi February 2012. Waxaa jiray dhowr shir oo loogu diyaar-garoobaayay shirkaas weyn oo dowladi uu Raiisul Wasaaraha ka ahaa David Cameron ay ku qabatay guriga Chatham House iyo Lancaster House laftiisa. Aweys waxaan dib ug wada kulannay shirka lagu qabtay Chatham House kadib marki uu su'aal aad u mug weyn halkaas ku weydiiyay qaban-qaabiyaashi shirka. Isla-marki ma aqoonsan karin waayo sanado badan ayaa kasoo wareegay marki iigu dambeysay, laakiin xilligi birirfta la galay ayaan la kulmay.
3. Bacdamaa aan ahaay masuul ka tirsan hay'ad ka shaqeyneysay sidi wada-hadal, is-afgarad iyo dimuqraadiyad ay dadka Soomaaliyeed uga gudbi lahaayeen colaadaha dalka ka jira oo magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SIDD (Somali Initiative for Dialogue and Democracy), waxaan casuumaad u fidiyay Dr. Aweys inuu noo yimaado oo aan ka wada hadalno fikiradiisi mugga weyneyd ee Gobannimo oo uu islamarkiiba ii soo bandhigay, iina sheegay inuu rabay inuu daaboco.
4. Haddii sida ugu fudud loo qeexo, fikradda Gobannimo ee uu Dr. Aweys soo jeediyay waxay abbaareysay halbowlaha colaada Soomaaliya oo lagu tilmaamay 'qabaail isku haysta awooda dowladnimada'. Fikirkaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in qabaailka Soomaaliyeed (4ta qabiil ee waaweyn) ay si qota dheer uga fekeraan ama dib ugu noqdaan aragtidooda ku aadan awooda dowladnimada, towjiih cusubna ay ka qaataan si dadka Soomaaliyeed ay u helaan fursado ay wada-hadal, is-cafis iyo isu-tanaasul uga gudbaan dagaalada iyo colaadaha ragaadiyay dalka, nabad iyo dowladnimana loo dhaliyo. Si taas loo suurtageliyo, fikirka Gobannimo waxa uu ku baaqay in dowladi rasamiga ahayd ee markaas la filaayay in ay dhalato aakhirki sanadki 2012 (oo naqatay dowladi M/Weyne Xasan Shiikh), ayadoo laga duulaayo in dowladnimadi Soomaaliyeed ay ku burburtay gacanta qabaa'ilka, 3da jogo ee dalka ugu sarreysa (Madaxweynaha, Raiisul-wasaaraha iyo Af-hayeenka Baarlamaanka) loo dhiibo hoggaamiyaal lagu soo xulay aqoon, karti iyo hufnaan oo ka soo jeeda beesha 5aad. Hoggaamiyaashaas waxay noqonaayaan kuwa billaaba dowladdaas rasmiga ah ee dib-ugu-dhalaneysay ummaadda Soomaaliyeed 2012ki, waxayna shaqadeeda ugu mihiimsan noqo lahayd inay is-cafis iyo dib-u-heshiisiin ummadda ka dhex abuurto 4taas sano ee ay hoggaamyiaashaas xilka haayaan. Arrintaas, fikirka Gobannimo sida uu qabay, waxay tusaale cad u noqo lahayd inay dadka Soomaaliyeed aqbaleen sinnaanta ummadooda oo saldhig u ah jiritaanka nidaamka Jamhuurigaa ee dowladnimada.
5. Toddobaadki xigay, asagoo si sharf leh uga jawaabay casuumaadi aan casuumay, Aweys wuxuu noogu yimid xafiiskeeni SIDD oo ku yaala meel u dhow isteeshinka tareenada laga raaco ee loo yaqaan Victoria Station, London. Wuxuuna halkaas si qiira leh uga soo jeediyay doodiisi fikirka Gobannimo. Aragti aad u wanaagsan Ayaan fikirkaas ka qaadanayn, waxaana u aragnay inuu ahaa fikir hufan oo ugub ah oo mudan in la tixgeliyo. Sidoo kale, wuxuu noogu muuqday fikir wax weyn berigaas ka beddeli karay hab-siyaasadeedka lagu soo xulo masuuliyiinta xafiisyada sar-sare ee dowladnimada Soomaaliyeed, markaasna abuuri karay jawi ummadnimo iyo Soomaalinimo. Waxaan sidoo kale isla-garanay in fikirkaasu waqtigaas kala guurka ee la joogay uu ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ku baraarujin karay inay ka gudbaan is-takoorka, haybsooca, is-yasidda iyo dhammaan hagardaamooyinka kale ee haraadigaa oo xaqiiqadi marka lagu daro faqriga gaamuray ee ummadeena haysta ah waxyaabaha aasaaska u ah colaadaha dalkeena ku habsaday. Aweys waxa uu wareysiyo dheedheer la yeeshay masuuliyiin hore oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynayaal hore, iyo Raiisulware hore oo dhammantood berigaas soo dhoweeyay fikirkaas, laakiin nasiib darro siyaasiyiinta Soomaaliyeed fikir noocaas ah oo isbeddel mug leh oo bulsho iyo dhaqan iyo ilbaxnimo cusub keeni kara badankoodu waqtina uma haayaan, diyaarna uma aha.
Ra'yiga iyo fikirku waxa uu ka
yimaadaa aqoonta iyo kutubta cilmiga
6. Aqoonta iyo kutubta cilmigu waxay ummadda ku hagaan mabaadii'da asaasigaa ee nolosha. Waxay weliba si gaar ah muhiim ugu yihiin qofka hoggaamiyahaa oo laga rabo inuu fahmo mawaadiic ama arrimo aad u miliqsan ama aad u murugsan (marka la eego waddankeena) oo bulsha leh oo siyaasad leh oo dhaqaala leh, amni waafi ah iyo caddaaladna ay saldhig u yihiin iwm, sidi uu arrimahaas uga qaada lahaay fikir buuxa iyo aragti cilmi iyo aqoon ku dhisan, iyo sidoo kale inuu fahmo waddadi saxda ahayd ee uu u mari lahaa fahamkaas iyo wixi ficil ahaan laga yeelaayo intaba. Hoggaamiyuhu inuu yahay qofka kutubta cilmiga maadigaa in badan ka aqriyay (ama uu cilmiyan wax aqriskiisu u sarreeyo - scientifically literate) waa arrin aad u muhiim ah dunidaan maanta sida weyn u cakiran, weliba markay timaado dowlad dhiska waa qodob aad iyo aad u muhiim ah in hoggaamiyaheena soo socda uu noqodo shakhsi in badan ka daalacday kutubka cilmiga maadigaa casriga ah. Markaan si kooban u sheegno, aqoonta iyo aqriska kutubtu waxay kordhiyaan cilmiga qofka; cilmi mug weyn oo la bartaana waxaa laga dhaxlaa hoggaamiye hufan oo awood iyo karti hoggaamineed oo la taaban karo la yimaada.
7. Sababaha keenay colaadaha iyo dhibaatada dalkeena ku dhacday waxay lugaha la gelaayaan taariikhdeena, dhaqankeena, bay'adeena ama deegaankeena, arrimaheena dhaqan dhaqaale, siyaasadeed iyo weliba kuweena dowladnimo. Sababaha dowladnimo ee burburka keenay waxaa ugu muhiimsan in qarankeeni uu gabay wixi ciza iyo Sharaf uu umadda dhexdeeda ku lahaay oo awoodi dowladnimo gacanta ka baxday, wax adeeg bulsha ahna aysan dowladeeni bixi Karin. Kutubta cilmigaa iyo daraasadaha aqooneed oo kala duwan ayaa noo sheegaaya in dhammaan arrimahaas burburka keenay ay leeyihiin heerar kala duwan, sida heer qof ama heer shakhsi, heer qoys, heer bulsho ama beeleed, heer ummadeed, iyo weliba heer caalami iyo mid Ikoolojiyeed (Ecological level) oo ah xiriirka nooluhu (nooc kastaba ka naqdee) la leeyahay noolaha kale iyo bay'adda uu ku nool yahay intaba.
8. Tusaale, saameynta heerka qof iyo heerka qoys si loo fahmo, waxna looga qabto, waxaa loo baahan yahay barashada maadooyinka cilmi sayniska ee ay ka midka yihiin biology (barashada nidaamka dabiiciga ah ee waxa nool), physiology (barashada sida jirka bani-aadamku u shaqeeyo), philosophy ama falsafada, psychiatry (barashada cudurrada dhimirka ama maskaxda), psychology (barashada maskaxda bani-aadamku siday u shaaqeyso iyo siday u saamayso dhaqanka ama ficilka qofka ama bulshada), iyo maadada loo yaqaano theology (barashada cilmiga diinta iyo asaasiyaadkiisa); tan heerka bulsho, waxaa loo baahan yahay aqoonta iyo barashada ugu yaraan maadooyinka cilmigaa ee kala ah anthropology (barashada baniaadamka qowmiyad ahaan, dhaqan ahaan, bulsho ahaan, iyo horumarka maadiga ah ee dadkaasu ay gaaraan), economics ama dhaqaalaha (barashada ganacsi, warshadeyn, iyo lacageed ee umadu leedahay iyo sida ay isula jaanqaadaan), history ama barashada taariikhda, political science (cilmiga ama barashada siyaasada), iyo sociology (barashada cilmiga bulshada); tan heerka calami ama heerka bay'adeed/ikoolojiyeed, haddii aan dhowr shay ka magacawno, waxay u baahan tahay barashada cilmiga cimilada (climatology), kan bay'adda (ecology), maadada juquraafiga (geography), iyo tan barashada dhagxaanta iyo macdanaha kala duwan ee dhulka iyo ciida ku jurta (geology). Marka la isku wada daro, tan micneheedu waxa waaye in arrimaha iyo culeysyada kala duwan ee dalkeenu waajahaayo ama la daala-dhacaayo ay guntooda hoose jirto maadooyin cilmi ah oo aad u kala duwan, sidaas darted waxaa loo baahan yahay in jawaabo munaasab ku ah heerarkaas kala duwan looga helo dhammaan maadooyinkaas cilmigaa ee aan soo sheegnay oo dhan. Sidaas darted, qofka hoggaaminaaya Soomaaliya waa inuu ku wacyi gashan yahay in cilmiga baaxaddaas leh looga baahan yahay jawaabo iyo faham aad u qota dheer si loo waajoho dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee dalkeena iyo dadkeena haysta.
9. Sidoo kale, hoogaamiyaasheena waxaa looga baahan yahay inay wax badan ka fahamsan yihiin ama kutubta cilmiga iyo daraasadaha caalamigaa ka aqrisan karaan maadooyinka ay ka midka yihiin dustuurada federaalka iyo nidaamyada/aragtiyada siyaasadda iyo xukunka kala duwan iyo dowladnimada. Bacdamaa aan dhiseyno dowlad federaal ah, waxaa loo baahan yahay inay si baaxad leh u fahmaan maadada isu-bar bar dhigga federaallada kala duwan (comparative federalism), iyo dabeecadaha waqtigan casrigaa federaalada kala duwan iyo waddamada haystaa ay leeyihiin. Waa in ay cilmiyan u fahmaan daraasadaha kala duwan ee laga sammeeyay maadooyinkaan iyo nidaamka 'isku-xirka ganacsi iyo teknoolojiyadeed ee dalalka dunida' (globalization) ee manta xawliga weyn ku socda, iyo waaya-aragnimada laga helay iyo sida ay ula falgalaan nidaamka dowlad-dhiska dalalka dagaalada kasoo kabaanaya sida dalkeena oo kale iyo doorka nidaamka federaalku ka cayaari karo dib isugu soo celinta ummadeena dagaalada sokeeye ay kala irdheeyeen.
10. Haddaba, inta aan kor kusoo sheegay oo dhan waxaa micnohoodu yahay in loo baahan yahay in hoggaamiyaaasheenu ay si cilmi ah u aqrin karaan maadooyinka kala ah: dowlad, awoodda dowladnimada iyo mabaadii'da siyaasadda; si qota dheer maadada federaalka iyo awoodaha kala soocan; xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadinka; hay'adaha dustuuriga ah ee dalka , sida baarlamaanka, madaxtooyada iyo ha'adaha fulinta iyo maamulka dowligaa; dustuurka; sharciga iyo hay'adaha nidaam-ciqaabeedka, sida boliiska, maxkamadaha iyo hay'adaha asluubta; siyaasadda dimuquraadiyeenta, axsaabta siyaasadda iyo doorashooyinka; iyo danaha siyaasadeed ee iska hor-imaanayaa iyo sida loo maareeyo. Hawsha aqris iyo aqoon cilmiyeed ee laga rabo qofka hooggamiyaha noqonaaya aad ayay u baaxad weyn tahay; waana muhiim in hoggaamiyaasha Soomaaliyeed ay leeyihiin maskaxdi iyo waaya-aragnimadi aqooneed iyo hab-fikir mandiqi ah oo ay wax ku aqrin karaan, ku fahmi karaa, kuna dabaqi karaan aqoontaas aadka u baaxadda weyn ee loo baahan yahay in laga akhriyo kutubta cilmigaa ee casriga ah, kadibna ay la soo shir tegi karaan afkaar ugub ah oon horay loo maqal oo loo adeegsan karo xallinta dhibaatooyinka mugga weyn ee ummadda Soomaaliyeed maanta dhinac kasta ka haysta.
Maanta waxaan u baahannahay inaan
dhabba ugub ah oo xal noo iftiimiya helno
11. Maanta waa inaan dhammaanteen isku raacno in doorashada hoggaamiyaha dalka sidi ay ahaan jirtay marki hore aannaan ku dhaafin oo loo baahan yahay inaan dhabba cusub u qaadno doorashada hoggaamiyaha cusub. Maxaan ugala jeedaa 'dhabba cusub'? Su'aasha lama huraankaa oo ay tahay inaan is-weydiino waa tan: Haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed, sideen dalkeena nabad waarta iyo dowladnimo wax ku ool ah uga dhalin karaa si aan uga guuleysano dhibaatooyinka culus ee ummadeena ku habsaday, ilaa iyo maantana taagan? Inaan ka guuleysano dhibaatooyinkaas micneheedu waa dalka oo la wada gaarsiiyo amni iyo xassilooni, dowladeena oo ay ummadeenu wada aqbasho lana shaqeyso, dowladeena oo mashaakilaadka iyo xasaradaha bani-aadminimada ee ka taagan dalkeena wax la taaban karo ka qabata, dowladeena oo dhista awoodeena ummadeed ee aan wax ku qabsan karno, iyo dowladeena oo ummadeena intooda badan nolol iyo nacfi, shaqooyin, iyo dhaqaale ummadu ka wada faa'iideysato (functioning formal economy) oo aan qola yar gacanta ku hayn abuurta. Guuldarro waa caksiga ama bedelka inta aan kor ku soo sheegay. Labaatan sano kadib marki dowladi ku-meel-gaarka ahayd (TNG) lagu soo dhisay degmada Arta ee Djibouti, waxaa noo muuqata in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku guul-darreysatay in ay wax ka qabato dhammaan arrimaha aan kor kusoo sheegay.
12. Ummaddeena waxaa haysta dhibaato aad u mug weyn oo heer kasta u saameysay waayo waxaan haleeli kari weynay inaan hoggaan karti iyo aqoon leh oo isbeddel sameyn kara aan doorano. Waxaan u baahannahay inaan dhaqankaas beddelno sanadkaan oo aan doorano hoogaamiye leh hiigsi sare, awood waxqabad iyo hal abuur, oo talooyin wax ku ool ah oo si mug leh wax uga beddela dhibaatooyinka ummaadeed ee na haysta la yimaada. Hawsha na hortaalla ee la rabo in la qabto waxay u baahan tahay hoogaamiye kala saari kara xaqiiqada iyo huuhaada; si waadax ah oo la wada fahmi karana uga turjuma duruufaha wejiyada badan ee dalku ku sugan yahay, runta sheega, lana imaan kara xal munaasab ah oo lala beegsado dhibaatooyinka na haysta. Waxaan u baahannahay hoggaamiye soo bandhigi kara talooyin ugub ah oo wax ku ool ah oo loo adeegsado dib-u-dhiska dowladnimadeena iyo ummadnimadeena.
13. Dr Aweys Cumar Maxamuud waa shaqsi aqoon sare leh, waxaana uu noqon karaa hoggaamiye hufan oo lagu aamini karo inuu isbeddel muuqda oo wax ku ool ah ka sammeeyn karo dalka. Waxa uu wax ku bartay oo ka qaatay shahaadad PhD jaamacadda loo yaqaano University College London (UCL) oo ka mid xarumaha tacliinta sare ee ugu magaca dheer dalka UK. Aweys waxa uu leeyahay xirfad aqooneed oo uu dalka ku hoggaamin karo iyo waayo aragnimo ah inuu dalka ka soo shaqeeyay sanadihi lasoo dhaafay. Aweys waxa uu ku noolaaday, wax ka bartay, kana shaqeeeyay qaarado kala duwan oo uu ka soo helay waaya-aragnimo la xiriirta sida ay dadyowga adduunku wax u qabsadaan, noloshooda iyo dowladnimadoodana u maareeyaan. Sidaan kor ku soo xusay Aweys waxa uu leeyahay khalfiyad aqooneed oo maadooyin kala duwan ka immaaneysa sida caafimaadka guud, waxbarashada iyo horumarinta caalamiga, luqadaha iyo barashada sharciga, cilmiga bulshada iyo cilmu-nfasiga intaba, hawshiisana intaas oo khibrad aqooneed ah oo maadooyin kal duwan ka immaaneysaa ayuu ku dabaqi karaa, haddii fursaddaas hoggaamineed uu helo. Sidoo kale, waxa uu wax badan ka aqriyay dhammaan maadooyinka iyo kutubta cilmiyeed een kor ku soo xusay.
14. Aan si kooban idiinla wadaaga waxyaabihi uu ii sheegay mar aan maalin dhoweyd koffee wada cabnay. Waxa uu igu yiri, waxaan joogay London aakhirki sanadki 1990ki, anigoo ka sammeynaaya koorso Masters Degree ah oo la xiriirta tacliinta iyo horumarinta caalamka Machadka Tacliinta ee Jaamacadda London. Kutubta cilmiga, daraasaadka cilmi-baariseed, warbixinnada aan markaas akhrinaynay, iyo casharrada fasalka gudihiisa iyo markaan shaqo koox kooxeed sammeyneynay intaba waxaan ka hadleynay sidi waddan kasta oo ka mid ah dadka kooraska markaas sammeynaayay (kudhowaad ilaa 30 waddan) ay u meel-mari lahaayeen hiigsiga iyo ajendihi caalamigaahaa ee berigaas taagnaa oo ahaa 'Waa in qof kasta oo dunida ka mid ah tacliin helo' (Education for All). Hindihaas oo lagu gaaray Shirweynihi Waxbarashada Adduunka oo horraanti sanadkaas (March 1990) lagu qabtay magaalada Jomtien ee dalka Thailand, ayna ka soo qeyb-galeen wakiilo ka socday ilaa 150 waddan. Shirweynahaas waxaa lagu go'aansaday in dhammaan waddamada dunida iyo ha'yadaha caalamigaa ay meel mariyaan barnaamijka lagu gaarsiinaayo tacliin hufan dhammaan carruurta dunida, dhallinyarada iyo dadka waaweyn intaba sanadka 2000. Ardayda ay Aweys fasalka wada dhiganaayeen dhamaantood waxaa shucuurkooda, fikirkooda iyo akhriskooduba ku wajahnaa barnaamijka 'waa in qof kasta tacliin helo', halka Aweys uu ku mashquulsanaa mushkiladda siyaasadeed iyo colaada hubeysan ee berigaas dalkeena ka socotay, gaar ahaan caasimada Muqdisho. Waxay ahayd bishi December 1990ki, intaas wax ka badan inaan sheegno uma baahnin.
15. 10 sano kadib, 8di September 2000, kulanweynihi loogu magac daray 'The Millenium Summit' waxaa isugu yimid magaalada New York, xarunta Qaramada Midoobay, inti tiro ugu badneyd taariikhda ee hoggaamiyaasha dalalka dunida kuwaas oo isla qaatay baaq la yiraa 'Baaqi bilowga 1000ka Sano ee Qaramada Midoobay' (the United Nations Millennium Declaration) oo ahaa heshiis bilowga qarniga 21aad lagu gaaray in dalalka adduunku ay u midoobaan la dagaalanka faqriga sida ba'an u halakeynaaya dunida saboolka ah, ayadoo halkaas lagu gaaray halbeegyo rasmi ah oo loo qabtay in lagu meelmaryo ka hor sanadka 2015ka. Heshiiskaas waxaa loo bixiyay 'Yoolasha Horumarineed ee Bilowga 1000ka Sano' (The Millennium Development Goals), waxaana yoolashaas ka mid ahaa: in la ciribtiro faqriga iyo gaajada ba'an; in waxbarashada asaasigaa ama dugsiga hoose ay wada helaan dhammaan carruurta dunida; in la horumariyo sinnaanta bani'aadamka, gabdhahana aqoontooda la kobciyo; in la dhimo dhimashada carruurta da'da yar yar; in la hagaajiyo oo la horumariyo caafimaadka hooyooyinka; in lala dagaalamo cudurrada Aids-ka, Duumada, iyo cudurrada kale; in la ilaaliyo, lana badbaadiyo bay'adda; iyo in la meel-mariyo iskuduubni iyo iskaashi heer calami ah oo la iska kaashanaayo meel-marinta yoolashaas horumarineed ee lagu heshiiyay. Halka waddamada dunidu ay isugu yimideen wax ka qabashada arrimahaas ban-aadminimo ee asaasigaa, annaga Soomaali ahaan, kana mid ah ummadaha dunida, xaggeen joognay berigaas? Waa ognahay in wax yar ka hor waqtigaas (bilihi April-May, 2000) la dhisay dowladi Carte ee la dhihi jiray TNGda, iyo sidoo kale in Madaxweynihi dowladdaas Mudane Abdiqaasim Salaad Xasan uu goob-joog ka ahaa shirkaas, laakiin ficliyan maxay ahayd xaaladeena ummadeed ee dalka gudihiisa ka jirtay berigaas? Mar kale, looma baahna inaan wax intaas dhaafsiisan sheegno!
16. 15 sano kadib, 25kii September 2015, in ka badan 150 hoggaamiye oo ka kala yimid shanta qaaradood ee adduunka ayaa uga qeyb galay magaalada New York 'Kulanweynihi Qaramada Midoobay ee Horumarinta Waarta' (United Nations Sustainable Development Summit), halkaas oo la isla qaatay ajanda cusub oo loo bixiyay 'Ajandaha 2030 ee Horumarinta Waarta' oo ka kooban 17 yool. Yoolalkaan horumarineed ee cusub, oo sidoo kale loo yaqaano 'Yoolalka Adduunka' (the Global Goals) waxaa loogu talagalay in lagu ciribtiro faqriga, gaajada iyo sinnaan la'aanta, in badbaadada bay'adda iyo cimilada tallaabooyin wax ku ool ah dhankooda loo qaado, in la baahiyo fursadaha ay dadku ku heli karaan adeeg caafimaad iyo mid waxbarasho, iyo in la dhiso hay'ado xoogan oo waxqabad leh iyo in iskaashi loogu midoobo meelmarinta yoolashaas, iwm. Haa dabcan waxaa joogay oo ka qeyb-galay shirkaas Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud laakiin maanta oo ay tahay dhammaadki bisha October 2020, masaafa ahaan intay noo jirta inaan meelmarino yoolasha Ajandaha 2030 oo 10 sano oo kaliya hadda naga xigto. Dal kasta, dad kasta iyo ummad kasta oo dunida ku nool, waxay u halgameysaa inay hesho xorriyad, caddaalad iyo nolosha dadkeeda inay horay u mariso, annaga maxaa noo diiday?
17. Dr Aweys wuxuu markaas ii sharraxay aragtidiisa Meesha ay tahay in loo dhaqaaqo sanadkaan; wuxuuna ila wadaagay ajende tifatiran oo uu shacabka usoo bandhigi doono waqtiyada nagu soo aadan; waana barnaamijki uu ugu talagalay waxqabadkiisa haddii uu ku guuleysto tartanka madaxtinimada. Afkaarta ajendihiisa ku xusan waxaa ka mid ahaa: (1) sida uu ula imaan doona tallaabooyin iyo waxqabad bilaw ah oo uu ku kasbanaaya dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada; (2) afkaar ku saabsan in awooda siyaasadeed ee DFS loo adeegsado xoojinta iyo hirgelinta sharciga iyo kala dambeynta, asaasna looga dhigo sinnaan iyo caddaalad; (3) sida uu awooda dowladda Soomaaliyeed oo dhan isugu geyn doono, haddii la doorto, in la fuliyo waajibaadka qaran ee DFS ay leedahay kuwaas oo saldhig u ah xiriirka ummadeena iyo dowladeena oo laga rabo inay difaacdo xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadinka, in muwaadinku helo adeeg caddaaladeed oo hufan, iyo dhaqanka DFS oo loo beddelo mid ku dhisan isla-xisaabtan iyo daah-furnaan u dhaxeysa shacabka iyo dowladda; (4) sidi loo heli lahaa, loona horumari lahaa waxbarasha tifatiran (oo isugu jirta mid akadeemiyeed iyo mid farsamo) oo ay helaan carruurta, dhallinyarada, iyo dadka waaweyn (rag iyo dumar) intaba oo lagu jiheeyo shacabka mustaqbalka dhow, mustaqbalka dhexe iyo kan fogna noo horseeda sharci iyo nidaam, xasillooni iyo nabad. Weliba wuxuu si gaar ah u dul istaagay sidi loo maareyn lahaa carruurta aan dugsiyada dhigan oo la leeyahay tiro ahaaa waxay ka badan yihiin seddax milyan; iyo (5) afkaar la xiriirta shaqa abuur baaxad iyo mug leh oo noo horseeda in dhallinyarada loo jiheeyo shaqo, wax soo saar iyo in ay DFS abuurto fursado tirada ugu badan ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku heli karaan tacliin, tababarro xirfadeed iyo shaqooyin ay nooligooda ka soo saartaan, dalkuna u jiheysto wax soo saar, dhaqaale abuur iyo horumar nololeed. Waxaan ka markaati kacaayaa in ay arrimahaanu yihiin kuwa maskax-shiilkiisa kasoo maaxaayay markaan la sheekeystay Aweys, ee uusan marna isku mashquulin, kuna hadaaqin fikir-hoosaadki ummadeena dudumiyay ee ahaa ka dhashay, ku dhashay, u dhashay, iwm. Aweys Cumar Maxamuud waxa uu ku dhashay, kuna barbaaray Degmada Aaadan Yabaal ee Gobolka Shabeelada Dhexe sanadki 1960. Waxay asaga iyo xaaskiisa H. H. Elmi ku soo korsheen dalka UK lix carruur ah oo shan ka mid ah ay maanta yihiin dad waaweyn oo waxbarashadoodi dhammeystay, kana shaqeysta dalka UK iyo dalal kale oo ka mid ah Ururka Midowga Yurub (EU).
18. Aweys waa shakhsi ka mid noqonaaya shakhsiyaadki ugu muhiimsanaa ee kasoo dhex baxa jiilki ugu horreeyay ee ku soo qaxootiyoobay qaaradda Yurub bilowgi dagaalada sokeeye 1980-aadki iyo 90-aadki. Waa shakhsi cilmi badan leh, wax bandanna akhriyay. Qof kasta oo booqda gurigiisa London waxaa Khasab ah inuu si weyn ugu farxo uguna hambalyeeyo Aweys maktabadda khaaskaa ee quruxda badan, kutubta aadka u faraha badan oo maada kasta lehna ay yaalaan. Kaliya maaha in aqoontiisu ay ku egtahay cilmiga uu sida khaaskaa u bartay sida cilmiga caafimaadka guud, maadada horumarinta caalamiga, iyo maadooyinka tacliinta iyo cilmiga bulshada ee wuxuu sidoo kale wax badan ka akhriyay falsafadda, cilmul adabka, cilmu-nafsiga iyo cilaaju-nafsiga, cilmiga siyaasadda, isu-barbardhigga kutubta cilmiga (comparative studies), taariikhda, iyo kutubta la xiriirta taariikh nololeedka. Waxaan haddaba si weyn u taageeraynaa aniga iyo asaxaabta kale ee hoos ku magacaaban Musharrax Madaxweyne JFS ee sanadka 2021 Dr. Aweys Cumar Maxamuud.
Ahmed Sharif Abbas, MD; PhD
Guddoomiyaha Hindisaha Wadahadalka iyo Dimoqradiyadda Soomaaliyeed ee UK (SIDD);
Guddoomiyaha (muddo 20 sano ah) Bulshada Benaadiriga ee UK;
Isku-dubaridaha iyo Tifatiraha (asaga iyo nin khabiir Ingiriis ah oo la yiraa Peter Riddell) buuga magaciisu yahay 'Toban Sano oo Qurbajoogta Soomaaliyeed ay Dadaal Nabar-Raadineed Wadeen'
Horay wuxuu Dr. Abbas usoo noqday:
Khabiir Caafimaadka Guud, Waaxda Caafimaadka Guud, Wasaaradda Caafimaadka Kensington & Chelsea iyo West Minister ee magaalada London, UK;
Khabiir Caafimaadka Guud, Wasaaradda Caafimaadka UK Hay'addeeda Fulinta, Agaasinka Caafimaadka Guud, London, United Kingdom;
Wasiir Ku-Xigeenka Caafimaadka, Dowladdii Ku-Meel-Gaarka Soomaaliya ee Carta, Djibouti lagu soo dhisay;
Agaasimihi Caafimaadka Guud, Wasaaradda Caafimaadka, Jamhuuriyadda Somaaliya.
Halkaan ka aqri (halkaan Riix) taariikh-noloeedka Dr Aweys Cumar Maxamuud oo kooban
Waxaa kaloo si kal iyo lab ah u taageeray Musharaxnimada Dr Aweys Cumar Maxamuud asaxaabta iyo akhyaarta magacyadoodu hoos ku qoran yihiin oo hawlo baaxad weyn oo la xiriira bulshada Soomaaliyeed ee UK iyo tan Soomaaliyaba aan wada qabanaynay sanadihii lasoo dhaafay. Fadlan halkaan ka fiiri (Riix Halkaan) nuqulka labada bog ee hore ee kutub ama buug aan anigu iskuduway/tifatiray oo cinwaankiisu yahay Istaraatiijiyada looga hortegi karo colaadaha, abaaraha iyo macluusha Soomaaliya oo dhammaan asaxaabtaan iyo Dr. Aweys laftiisuba ay ka wada qeyb-qaateen qoritaanka qeybihiisa kala duwan.